မှတ်ပုံတင်မရှိသဖြင့် နာဂတို့ အသံပျောက် | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
by Mizzima – News in Burmese (Notes) on Wednesday, March 13, 2013 at 7:29pm
ခိုင်ခိုင် | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ မတ်လ ၁၃ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၀၇ မိနစ်
ကုန်(မဇ္ဈိမ)။ ။ မှတ်ပုံတင်မရှိသဖြင့် နာဂတိုင်းရင်းသားများ၏ အခွင့်အရေးများနှင့် လူဦးရေ ဆုံးရှုံးမှု ကြီးကြီးမားမား ကြုံတွေ့နေရသည်ဟု ရန်ကုန် နာဂကျောင်းသား လူငယ် အဖွဲ့ချူပ် (ဥက္ကဌ) ဦးနော်အောင်ဆန်းက မတ်လ ၁၁ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောခဲ့သည်။
နာဂလူဦးရေ တိတိကျကျ စာရင်းရရှိရန် သန်းခေါင်းစာရင်း ကောက်ခံခြင်း မှတ်ပုံတင် လုပ်ပေးခြင်း ကိစ္စရပ်များမှာ အစိုးရ လုပ်ဆောင်ပေးရမည့် အပိုင်းသာဖြစ်ကြောင်း နာဂလူဦးရေ အပေါ် အခြေခံပြီး လူဦးရေ အများဆုံး နေထိုင်ရာ ဒေသများတွင်သာ စာရင်း တိတိကျကျ လုပ်ထားခြင်းများ မရှိသောကြောင့် လေရှီး လေဟယ်၊ နန်းယွင်းဒေသတို့မှာသာ မှတ်ပုံတင်ရကြောင်း နာဂတောင်တန်းဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ကွန်ယက်(အတွင်းရေးမှူး) ဦးဇော်ဝင့်ဖြိုးက ပြောသည်။
၎င်းက“မှတ်ပုံတင်မရှိလို့ ဆုံးရှုံးတယ် ဆိုတာက နာဂကိုယ်ပိုင် အုပ်ချူပ်ခွင့်ရ ဒေသက လူဦးရေ အပေါ် အခြေခံပြီး ဖွဲ့ထားတယ်။ လူဦးရေ အများဆုံး နေထိုင် ရာဒေသပေါ့။သူတို့ရဲ့ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ အပေါ်ကို အခြေခံပြီး လုပ်ထားတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့က (၃)ဒေသ ပဲရတယ်။ အမှန်တကယ်ဆိုရင် စာရင်းသာ တိတိကျကျ ကောက်နိုင်ခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီထက် ပိုရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ နာဂတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အသံပျောက်သွားတာပါ။ ” ဟု ပြောသည်။
၎င်းက “ ကျွန်တော်တို့ နာဂလူမျိူးတွေက စာမတတ်ဘူး။ နောက်တခုက ဆက်သွယ်လမ်းလဲ မရှိဘူး။ အဲဒီမှာ မှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ နာဂတိုင်းရင်းသားတွေက ခရီးသွား လာဖို့လဲ မလိုဘူး။ မှတ်ပုံတင်ကို တန်ဖိုးမထားဘူး။ ခရီးသွားဖို့ လိုတဲ့လူတွေပဲ လုပ်ကြပေါ့။ မှတ်ပုံတင်ဌာန(လ.၀.က)က လူတွေ အတင်းသွားလုပ်ပေးလဲ မလုပ်ချင်ဘူး။ အလကား လုပ်ပေးတာတောင်မှ သူတို့ မလုပ်ချင်ကြဘူး” ဟုပြောသည်။
မှတ်ပုံတင် လုပ်ထားရမည်ကို သိသည့် ကျေးရွာများတွင်တော့ လုပ်ချင်သော်လည်း အချိန်နှင့် ငွေပါကုန်ပြီး မှတ်ပုံတင်တခု လုပ်ရသည်မှာ ခက်ခဲကြောင်း၊ မှတ်ပုံတင် မလိုချင်သူများက ရပြီး လိုချင်သူများက မရဖြစ်နေကြောင်း ဦးစီမူထောင်းက ပြောသည်။
၂၀၁၄ မှာသန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ချိန်တွင် နာဂလူမျိူးများကို ထည့်သွင်း ကောက်စေချင်ပြီး တာဝန်ရှိသူများက တိတိကျကျ မှန်ကန်သည့် စာရင်း ကောက်စေ ချင်ကြောင်း နာဂနှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် အဖွဲ့ချူပ် (ခန္တီး) (အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး) ဆရာတော် ဦးစိန်မောင်က ပြောသည်။
၎င်းက “ နာဂ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချူပ်ခွင့်ရဒေသမှာ (၃)မြို့နယ်ထဲ မဟုတ်ပဲ ခန္တီးတို့ ဟုမ္မလင်းတို့ ပါသင့်ပါတယ်။ တိတိကျကျနဲ့ ကျွန်တော်တို့ နာဂလူဦးရေကို ဖော်ပြီးတော့မှ ဆက် လက်ပြီး လုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆို အောင်မြင်လိမ့်မယ် လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျွန်တော် သိသလောက်ကတော့ နာဂတွေ သုံးသိန်းခွဲ ၀န်းကျင်ရှိတယ်ဆိုတာ မှတ်ပုံတင် မရတဲ့ ဦးရေ တော်တော်များများ ရှိတယ်” ဟု ပြောသည်။
This entry was posted on March 13, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← Attachments of Rohingyas’ doccuments(Part – 4), ရိုဟင်ဂျာအထောက်အထားဆိုင်ရာ ပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းများအပိုင်း(၄) …	Ruling Party MP Warns of Renewed Arakan Violence →